Dhulgariirka Ecuador oo dilay 77 qof - BBC Somali
Dhulgariirka Ecuador oo dilay 77 qof
Image caption Dhulgariirka ku dhuftay Ecuador
Ugu yaraan 77 qof ayaa waxa ay ku dhinteen dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee muddo tobaneeya sana ah ku dhufta dalka Ecuador.
Ku dhawaad 600 oo qof ayaa la og yahay in ay dhaawacmeen, hasayeeshee madaxweyne ku xigeenka dalkaasi ayaa waxa uu ka digay in dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirkaasi ay sare u kici karaan.
Xaalad degdeg ah ayaa looga dhawaaqay lix gobol oo dalkaasi ka tirsan iyadoo ciidammada Ilaalada Qaran loo daadgureeyay deegaanada uu dhulgariirku ku dhuftay.
Hay’adda Mareykanka ee culuumta dhulka ayaa sheegtay in dhulgariirku uu cabirkiisu gaarsiisnaa 7.8, bartamana ay u aheyd meel 27 km koonfur bari ka xigta magaalada Muisine oo ah magaalo ku taal xeebta galbeed.
Dhismooyinkii halkaa ku yaallay ayey waxyeelo soo gaareen amaba burbureenba, waxaana ka mid yahay taawar ama qalcad lagala socdo dhaqdhaqaaqa gagi diyaaradeed.
Sawirro la soo dhigay baraha ay bulshadu ku wada xiriiraan ayaa muujinaya buundo burburtay iyo gawaari isku dhacay.